About Us - Ningbo Scojet Import & Export Co., Ltd
Scojet yinkampani yoyilo imveliso, nocoselelo machining kunye lemveliso ngamazwe ekuziseni izisombululo yokuvelisa sasekhaya nesamazwe ngamazwe koosomashishini ngokusebenzisa abavelisi OEM enkulu.
Scojet, Inc. Wavula iingcango zalo ngo-2001 ishishini kuyilo lwemveliso, ngowe-2004 saqalisa imisebenzi yethu kogcino-ngamazwe, 2008 sathenga umatshini wethu wokuqala CNC kwaye uqale ukusebenza zethu machining US, 2011 zaqalwa imisebenzi yethu aerospace machining kwi-US kunye wafumana AS9100 / izitifiketi zethu ISO9001, 2015 sazivula Ningbo Scojet Import Export Inkampani e Ninghai China ukuncedisa abathengisi kunye nokuphucula umgangatho, inkxaso zobunjineli ukwenza ikhonkco yethu unikezelo ngokukhawuleza kwaye kakuhle ngakumbi.
Siye besiza iinkampani ngokuzisa iimveliso zazo emarikeni iminyaka engaphezu-16. ezomhlaba Scojet phezu iiprojekthi 60 ngonyaka ukususela ingqiqo kwimveliso kwiinkalo ezifana aerospace, izithuthi, utyani, umyezo, iimveliso kwabathengi kunye namashishini zonyango.
Scojet i technical kakhulu, ushishino ukukhula silwe linembali design and lemveliso ngempumelelo phantsi iibhanti zethu.
inkampani yethu urhwebo China kunye namaqabane ukuvumela ukuba ukuzisa iimveliso yehlabathi kwiinkampani abafuna ukukhuphisana kurhwebo lwamazwe ngamazwe sasiphila ngoku. Uninzi namahlakani ethu nazo ISO9001 esingqinisisiweyo kwakunye bonke baye kudlule inkqubo yethu yemfundo.
CNC guququ nokugaya aluminiyamu ezifana uRene, Inconel, Waspaloy & Titanium, Swiss Machining, Product Design, Plastic / irabha Ukubumbela, Metal Ivoti: Sand, Die and Investment, Cables Control Mechanical, ukuKhanya Systems kuquka Halogen kunye LED, Ukunyathela kunye Metal Ukubumba.
Thina nikeza iintlobo ezahlukeneyo yeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso elilungileyo. Sivuya ukufumana UPhicotho yakho kwaye siza aphendule kuwe kamsinya kangangoko kunokwenzeka. Asigungqi umgaqo 'Kubunjani kuqala, inkonzo kuqala, ukuphucuka okuqhubekayo kunye ezintsha ukuhlangabezana abathengi "Kuba ulawulo" Zero onesiphene, zero izikhalazo "Njengokuba injongo esemgangathweni.